Sweat, ungavumeli kube yinkinga | Amadoda aSitayela
Ngabe ukujuluka sekuyinkinga ongazi ukuthi ungabhekana kanjani nakho?
Ukubona ukuthi sijulukile kuhlala kusenza singakhululeki, futhi ikakhulu lapho sizwa ukuthi abantu abasizungezile bayayibona inkinga esinayo. Uma singabhekani nalokhu ngokushesha okukhulu, yini kuyinkinga yomzimba Kungaba yinto yengqondo egcina ithinte imikhakha yomuntu siqu neyomsebenzi, ize ibangele ukukhishwa komphakathi nokungazethembi kithi.
Lokhu kugcina kudala ukuphelelwa yithemba kithina, okusenza siqale ukuzama zonke izinhlobo zamakhambi asekhaya nemikhiqizo okuthiwa iqeda inkinga yokujuluka, kodwa singatholi lutho. Badlula ngakithi izidakamizwa, izidambisi, futhi izikhathi eziningi kugcina sekubhekiswa ku- ukuhlinzwa noma i-botox ukunciphisa inkinga yokujuluka.
Ngesonto eledlule ngikwazile ukuhambela ukwethulwa kwe- I-Perspirex eMadrid, kulapho engaqala khona ukuqonda inkinga ebangelwa ukujuluka kulabo bantu abanokujuluka okweqile.
I-Perspirex ozelwe ngaleso sidingo. Imikhiqizo yokuphikisa inciphisa umjuluko, kepha yi-30% kuphela, noma kunjalo I-Perspirex inciphisa le nkinga ngo-65% futhi isebenza kusuka ezinsukwini ezi-3 kuye kwezi-5.
Ukuyisebenzisa kulula kakhulu, kufanele nje uyisebenzise endaweni ezolashwa ngaphambi kokulala, ngesikhumba esihlanzekile nesomile, bese ngakusasa ugeze leyo ndawo bese ususa umkhiqizo. Isixazululo sayo se-aluminium chloride ne-lactate silapha le nkinga kusuka ngezansi, siyenze ingene emgodini wezithukuthuku, ivimbele ukusebenza kwayo, futhi inciphise ukukhiqizwa kwezithukuthuku ngama-65%. Umphumela uyanyamalala ngemuva kwezinsuku ezimbalwa lapho umkhiqizo ususwa ngenqubo yokuvuselela isikhumba semvelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Umjuluko, ungavumeli kube yinkinga